I-China Fused Silica Grain Umkhiqizi Nomphakeli | I-Dinglong
Izinhlamvu zethu ze-silica ezihlanganisiwe zingaphezu kwama-99.98% amorphous futhi zinokulingana okuphansi ngokweqile kokunwetshwa okushisayo, i-chemistry engaguquguquki nokumelana okuphezulu nokwethuka okushisayo. Itholakala kumamaki ahlukene nezinhlobonhlobo zamasayizi wezinhlayiyana ezijwayelekile futhi kungenziwa ngezifiso kokucacisiwe kwakho.
I-coefficient yokwanda okuphansi okushisayo, i-chemistry engaguquguquki nokumelana okuphezulu nokwethuka okushisayo
Izinhlamvu ze-silika ezihlanganisiwe ze-Dinglong zikhiqiza eminye imikhiqizo esezingeni eliphakeme emakethe. Njengoba lezi zinhlamvu zinokuqina okuphezulu kwevolumu, ukunwetshwa okuphansi kwe-volumetric nokuhlanzeka okuphezulu, zivame ukusetshenziselwa amandla elanga, ama-refractories, ukucutshungulwa kokutshalwa kwezimali ngokunemba, izimboni ze-elekthronikhi ne-oyela negesi. Lezi zinhlamvu ze-silica ezihlanganisiwe ziyahlolwa ngaphansi kwezimo ezahlukahlukene ukuqinisekisa ukuthi zizohlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu ngobukhulu nokuqina.
Izinhlabathi ze-silika ezifakiwe ze-Dinglong zenzelwe ukuvumelana nokuthembeka. Ukuze kuqinisekiswe ubumsulwa nokuvumelana kwezihlabathi zethu ezihlanganisiwe zesilica, sisebenzisa ama-state-of-the-art particle analysis systems, izinqubo zokugaya nokuxuba ezithuthukisiwe, nezindlela ezibanzi zokuhlukanisa amandla kazibuthe amakhulu.
Izinhlamvu ze-silika ezihlanganisiwe ze-Dinglong ziyatholakala kumamaki ahlukene kanye nosayizi ohlukahlukene wezinhlayiyana futhi zingenziwa ngezifiso ekucacisweni kwakho. Lezi zinhlabathi ze-silica ezihlanganisiwe zenziwe ngokuguquguquka okwakhelwe ngaphakathi futhi zingalungiswa ngezidingo ezithile zohlelo lokusebenza. Izinhlabathi ze-silica ezifakiwe ze-Dinglong ziyatholakala kuma-2,200 lbs. (1,000 kg) amasaka esikhwama.
Langaphambilini I-Silica Sand ehlanganisiwe
Olandelayo: Izinto ezihlanganisiwe ze-Silica Flour Refractory